Soo dejisan Google Translate 3.2.0 – Vessoft
Soo dejisan Google Translate
Google Translate – turjumaan caan ah, haboon oo sax ah ka Google. Software wuxuu taageeraa luqado badan oo kuu ogolaanaya in aad u turjumaan erayada, weedho ama text buuxa. Google Translate bixisaa shaqo ah in uu baaritaanku qoraalka daabacan oo u saamaxaaya in ay hesho turjumaad ah aayadahan aan kasoo xulnay. Software wuxuu taageeraa jeegga muddo, turjumaad ah la gelin lagu qoray iyo cod. Google Translate kuu ogolaanayaa inaad waafajinta weedho badan la isticmaalo ka aaladaha kale iyo aragti ah ama nadiif ah taariikhda turjumaad.
Haboon oo sax ah turjumaad
Aqbasho lagu qoray iyo cod
Skaanka iyo turjumidda qoraallada la daabacay
.Wadashaqayntaas Weedhahan oo wax badan la isticmaalo ka aaladaha kale
Google Translate Software la xiriira: